IKittery Cottage-isandula ukwakhiwa ngo-2020 - I-Airbnb
IKittery Cottage-isandula ukwakhiwa ngo-2020
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguSimone
I-Kittery Cottage yindawo yabucala, esanda kwakhiwa ekwiikhilomitha ezi-1.5 ukusuka kwisixeko esinomtsalane sasePortsmouth kunye nemizuzu ukusuka kunxweme oluninzi lolwandle. Ngokuhamba imizuzu elishumi ukuya eKittery Foreside unokufikelela kwiindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile. Iivenkile zeKittery zingaphantsi kweekhilomitha ezi-2 kude.
Le ndawo yakhiwe ngokutsha kwaye isetyenziswa okokuqala ngo-2020.
Ngaphakathi kwi-cottage, yonwabele ukhetho lwakho lwemisebenzi. Iglasi yewayini ephambi kwendawo yomlilo yerhasi ngokubamba indawo ekude inika isiphelo esimnandi sosuku, okanye mhlawumbi ungakhetha ukubukela inkqubo oyithandayo kwi55” Flat Screen HDTV eneApple & nentambo encomekayo kunye nesidlali seDVD. . I-intanethi enesantya esiphezulu nayo ibonelelwe kunye nebar yesandi (okanye sebenzisa i-Alexa) ukuze ukwazi ukudlala umculo owuthandayo. Iintlobo ngeentlobo zemidlalo kunye neencwadi zibonelelwa ukuba uzonwabele.
Igumbi lokulala lenkosi lenzelwe ukukholisa iimvakalelo, ukubonelela ngebhedi yokumkanikazi kunye nesigqubuthelo somqamelo, kunye nokungena kwisiqingatha sayo sokuhlambela. Ucango lweglasi olutyibilikayo lukhokelela kumgangatho wakho wobuqu onendawo yokuhlala. Ifeni yesilingi kunye ne-air conditioning iya kukugcina ukhululekile ngexesha lobusuku behlobo. Iilinen zikhona kuzo zonke iibhedi.
Igumbi lokulala lesibini litofotofo ngokulinganayo, likwanayo nebhedi yokumkanikazi enomqamelo ongaphezulu kunye nefeni yesilingi, kunye nomabonakude wescreen esicaba.
Igumbi lokuhlala libandakanya isofa yokumkanikazi enesigqubuthelo esingaphezulu somqamelo esinefeni yesilingi kunye neA/C.
Xa ungena ekhitshini elixhotyiswe kakuhle uya kubona iintlabathi zegranite kunye nazo zonke izixhobo ezitsha ezibandakanya uluhlu lwegesi eneoveni ephindwe kabini, i-microwave engaphezulu, isitya sokuhlamba izitya kunye nobungakanani obugcweleyo befriji esecaleni nge-ice dispenser. Izixhobo ezincinci zombane zibandakanya umenzi wekofu, iblender, imbiza yecrock, itoaster, imbiza yefondue kunye neketile.
Igumbi lokuhlambela eliphambili linemigangatho eshushu kunye nebhafu enejethi kunye neshawari. Iitawuli,
Isixhobo sokomisa iinwele, isepha, ishampoo, kunye ne-conditioner zikhona.
Ngaphandle kwegumbi lokuhlala sisilayidi esikhokelela kumngangatho onezihlalo ezitofotofo malunga nomngxuma womlilo wegesi. Kukho igrill yegesi kunye netafile yokutyela yangaphandle ukonwabela ukutya kwakho ngaphandle.
Ezantsi uya kufumana igumbi lokuhlambela labucala (isicoci sinikezelwe) enewasha entsha kunye nesomisi ukuze ungapakishi zonke ezo mpahla zinesanti yaselwandle. Sinezitulo zesanti ezintandathu oza kuzisebenzisa ukuze uzizise elunxwemeni.
5.0 · Izimvo eziyi-160
Sizakuzama ukukubulisa ekufikeni kwakho kodwa ukuba asikwazi ukwenza oko sinendlela yokuba ungene ngokwakho kwigumbi lokuhlala. Sihlala kwipropathi, kodwa ayiqhotyoshelwanga kwi-cottage ke siyafumaneka ukuba uyasifuna, kodwa siya kucwangcisa ukukunika ubumfihlo!
Sizakuzama ukukubulisa ekufikeni kwakho kodwa ukuba asikwazi ukwenza oko sinendlela yokuba ungene ngokwakho kwigumbi lokuhlala. Sihlala kwipropathi, kodwa ayiqhotyoshelwanga kwi-co…